သင်နဲ့သင့်ချစ်သူက ဘယ်ဆယ်လီစုံတွဲနဲ့ တူမလဲ ? - Duwun Quiz
သင်နဲ့သင့်ချစ်သူက ဘယ်ဆယ်လီစုံတွဲနဲ့ တူမလဲ ?
ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ချစ်သူက ဆယ်လီစုံတွဲတစ်တွဲတွဲနဲ့တူနေတယ်ဆိုရင် ဘယ်စုံတွဲနဲ့တူလဲ မသိချင်ကြဘူးလား ? မေးခွန်းလေးတွေဖြေပြီး ကြည့်ကြည့်ကြရအောင်လေ…
သင်နဲ့သင့်ချစ်သူ တစ်ပတ်မှာရန်ဘယ်နှစ်ခါလောက်ဖြစ်တတ်လဲ ?
၁ခါ ကနေ ၃ခါ
သင်တို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်စိတ်ကိုတစ်ယောက် ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းသိတယ်ထင်လဲ ?
၇၀ နဲ့ ၉၀ ကြား
သင့်ချစ်သူနဲ့ ဘယ်လိုနေရာမှာ မင်္ဂလာဆောင်ချင်လဲ ?
သင်အကြိုက်ဆုံး Telenor ရဲ့ Package က ဘာလဲ ?
Share the quiz to show your results 🙂
အဖြေကြည့်ရန် facebook မှာ share ပေးပါဦး 🙂
အဖြေ = %%personality%%
Next story ဘယ်သီချင်းက လက်ရှိသင့်အခြေအနေကိုဖော်ပြနေလဲ ?
Previous story သင့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာ ကိန်းအောင်းနေတဲ့သတ္တ၀ါက ဘာဖြစ်မလဲ ?
ဘယ်သီချင်းက လက်ရှိသင့်အခြေအနေကိုဖော်ပြနေလဲ ?
ဒီလထဲမှာ သင့်အချစ်ရေးအခြေအနေ ဘယ်လိုရှိမလဲ ?
သင်က ဘယ်လိုချစ်သူမျိုးလဲ ?
24.06.2019 at 8:13 am
30.06.2019 at 1:25 pm
18.07.2019 at 1:22 pm